आजबाट ठिक तीन महिना वित्यो, कोरोना खोपको दोस्रो डोज लगाउन ढिला भए के हुन्छ ? [ भिडियोसहित ] – UPDATE LINK
आजबाट ठिक तीन महिना वित्यो, कोरोना खोपको दोस्रो डोज लगाउन ढिला भए के हुन्छ ? [ भिडियोसहित ]
आजबाट ठिक तीन महिना वित्यो, कोरोना खोपको दोस्रो डोज लगाउन ढिला भए के हुन्छ ? [ भिडियोसहित ] भिडियो अन्तिममा छ
काठमाडौ ।आज २३ जेठ २०७८, आइतबार हो । जेष्ठ नागरिकले पहिलो खोप लगाएको आज ठिक तीन महिना वित्यो ।२३ फागुनदेखि ६० वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिकलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप दिइएको थियो । डब्ल्यूएचओले तीन महिना भित्र अनिवार्य दोस्रो डोज लगाउनुपर्छ भनेको थियो । अब के हुन्छ ? यो बारेमा आज चर्चा गर्दै छौ ।
कोरोना भाइरस संक्रमण विश्वभर पुनः उकालो लागि रहेको छ। एक वर्षभन्दा बढी समयदेखि कोरोनासँग जुधिरहेको विश्वले अझै कोरोनाबाट मुक्ति पाउने देखिदैन।एक वर्षको अवधिमा कोरोना भाइरसका विभिन्न भेरियन्ट विकास भइरहँदा धेरै देशमा कोरोना भाइरसविरुद्ध विकास गरिएको खोप पनि लगाउने क्रम तीव्र रुपमा भइरहेको छ।
कोरोना भाइरसबाट बच्नका लागि विकास गरिएको खोपको माग विश्वभर अत्याधिक रुपमा भइरहदा यसको अभाव सिर्जना भइरहेको छ। यसको प्रत्यक्ष असर नेपालमा पनि देखिएको छ।नेपालले अक्सफोर्ड एस्ट्राजेनिकाले विकास गरेको र भारतको सेरम कम्पनीले उत्पादन गरेको कोभिसिल्ड खोप लगाएका थियो ।
खोप पहिलो डोज लगाइको ४ हप्तामा दोस्रो डोज लगाउनुपर्छ भनिएको छ । तर खोप नै नआएपछि यो रोकिएको छ ।केहीले चीनको खोप भेरो सेल खोप लगाएका छन् । विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन डब्ल्यूएचओले चिनियाँ सरकारी स्वामित्वको कम्पनी सिनोफार्मले विकास गरेको कोभिडविरुद्धको यो खोपलाई गत महिना आपत्कालीन प्रयोगको अनुमति दिएको थियो।
डब्ल्यूएचओले स्वीकृति दिएको युरोपबाहिर बनेको पहिलो कोभिड खोप त्यसअघि नै नेपालमा प्रयोगमा ल्याइसकिएको थियो। नेपाल र चीनसहित यो खोप अन्य देशमा अहिलेसम्म लाखौँ व्यक्तिहरूलाई दिइसकिएको छ। सो खोप करिब २८ दिनको अन्तरालमा दुई मात्रा लगाउनुपर्छ भनिएको छ ।
माघ १४ गतेदेखि चैत ६ गतेसम्म सम्पन्न खोप अभियानमा करिब १६ लाख बढीले खोप लगाइसकेका छन्। तर, भारतले खरीद गरेको १० लाख खोप समयमा नपठाउँदा खोप अभावका कारण खोप अभियान भने रोकिएको छ।
सेरमसँग नेपालले २० लाख डोज खोप खरीदका लागि अग्रिम भुक्तानी गरेको थियो। त्योमध्ये १० लाख डोज खोप मात्र नेपाल आएको छ। सेरमले बाँकी खोप अप्रिल अन्तिमसम्म पठाउने बताएको थियो । तर त्यो खोप आउने अनिश्चित बनेको छ ।
हुन त स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयले पहिलो प्राथमिकताको पहिलो चरणमा खोप लगाएका नागरिकलाई बैशाख ७ देखि १४ गतेसम्म दोस्रो डोज खोप लगाउने घोषणा गरिसकेको थियो । तर त्यो समय सबैले पाएनन् ।
पहिलो मात्रा लगाएका धेरै नागरिकहरु खोप अभावका कारण दोस्रो मात्रा लगाउन पाएका छैनन्, दोस्रो मात्रा लगाउन नपाए वा ढिला भएमा के हुने भन्ने जस्ता जिज्ञासाले चिन्तित बनिरहेका छन्।कोरोना खोपको दोस्रो मात्रा लगाउन ढिलाइ भएमा के हुन्छ ?
कोरोनाविरुद्ध उत्पादन गरिएको र आपतकालिन प्रयोगका लागि अनुमति पाएका धेरै खोप दुई डोज लगाउनुपर्ने प्रकृतिका छन्। नेपालमा लगाइएको खोपको पनि दुई डोज नै लगाउनु पर्ने हुन्छ।खोपको पूरा मात्रा लगाएको एक महिनापछि शरीरमा न्युट्रोलाइजेन एन्टिबडी बन्ने भाइरोलोजिष्ट डा लुना भट्ट बताउँछिन्।
पहिलो खोप लगाएको २८ दिनदेखि धेरैमा ३ महिनाभित्र दोस्रो डोज लगाइसक्नुपर्ने उनको भनाई छ। खोप लगाएको एक महिनापछि मात्रा शरीरमा एन्टिबडी बन्ने अध्ययनले देखाएको उनको भनाई छ। तर तीन महिना कटेको छ । नेपालमा दोस्रो खोप दिन सकिएको छैन ।
पछिल्लो समय विकास गरिएको बेल्जियमको कम्पनी ज्यानसेनले उत्पादन गरेको खोप भने एक डोज लगाए मात्र पुग्ने बताइएको छ। तर, अन्य खोप भने दुई मात्रा लगाउनुपर्ने प्रकृतिका छन्।तर स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयका प्रवक्ता दोस्रो मात्रा ढिलाइ भएमा वा नलगाएमा पनि खासै असर नपर्ने बताउँछन्।
उनी भन्छन्,‘ डब्ल्यूएचओका अनुसार कोभिड खोपको प्रभावकारीता ७२ प्रतिशत हो। पहिलो मात्राको ६० प्रतिशत प्रभावकारीता हुन्छ भनिएको छ। बाँकी १२ प्रतिशत पुरा गर्नका दोस्रो मात्रा आवश्यक छ। डब्ल्यूएचओले दोस्रो भन्दा पहिलो मात्रा लगाउनमा जोड देउ भनेको छ।
समयमा लगाउन सकियो भने त राम्रो भयो। हामीले सबैलाई दोस्रो मात्रा दिने नै भनेका छौँ।’ ढिला भयो भने केही फरक त पर्दैन तर केही प्रतिशत असुरक्षित नै रहनुहुने भयो । अब दोस्रो पुरा गरेको खण्डमा सुरक्षा प्रतिशत बढ्ने हो ।तर विश्व स्वास्थ्य संगठनले पहिलो र दोस्रो मात्रा बिचको अन्तर तीन महिना तोकेको छ । अब भने दोस्रो डोजको समय ढिलाइभइसकेको छ ।
शुक्रराज ट्रपिकल तथा सरुवा रोग अस्पतालका सरुवा रोग विशेषज्ञ डा अनुप बास्तोला पनि दोस्रो मात्रा लगाउन ढिलाइ हुँदा समस्या नहुने बताउँछन्।उनी भन्छन,‘पहिलो डोज लगाएपछि खोपले तीन महिना काम गर्छ भन्ने हो। दोस्रो खोप लगाउने बित्तिकै कोरोना नलाग्ने वा नसर्ने भन्ने होइन। त्यसैले दोस्रो डोज ढिलाइ हुँदा आत्तिहाल्नु पर्दैन।’ तर तीन महिना त वित्न लाग्यो नी ? भन्ने प्रश्नमा उनले यो भने सोच्नुपर्ने विषय आएको बताएका छन् ।
२३ फागुनदेखि ६० वर्षमाथिका जेष्ठ नागरिकलाई कोभिड–१९ विरुद्धको खोप दिइएको थियो । आज ठिक तीन महिना वित्यो । आज २३ जेठ २०७८, आइतबार हो । अब के हुन्छ ? चिन्ताको विषय बनेको छ । किनकी विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लूएचओ) ले दोस्रो डोज तीन महिना भित्र लगाइसक्नुपर्ने भनेको छ ।तर खोपको लागि काम गरिरहेको द भ्याक्सिन एलाइन्स गाभीले पनि खोप दोस्रो मात्रा लगाउन नपाएको खण्डमा डराउने पर्ने अवस्था नरहेको जनाएको छ।
अमेरिकास्थित रोचेस्टर युनिभर्सिटी न्यूयोर्कका माइक्रोबायोजोजिष्ट तथा इम्यूनोलोजिष्ट डेभिड तोपहमले खोप अभावमा दोस्रो मात्रा लगाउन नपाइमा त्यो ठूलो समस्या नभएको बताएका छन्। त्यसको समाधान के हुन्छ भन्ने चै अझै आएको छैन ।